Maamulka Jubbaland oo sheegay in abaaro ay ku dhufteen deegaano ka mid ah Jubbaland - Jowhar somali news leader
Maamulka Jubbaland oo sheegay in abaaro ay ku dhufteen deegaano ka mid ah Jubbaland
By Mahad	 Last updated Oct 13, 2021
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in abaaro iyo xanuuno aan la garanaynin oo ka jira qeybo kamid ah Jubaland ay dhibaato ba’an ku hayaan xoolo dhaqatada iyo beeraleeyda ku nool Jubbaland.
Axmed Madoobe Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in abaaraha ka jira qeybo ka mid ah Jubbaland ay u baahan yihiin gurmad caalami ah iyo in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo qoysaska ay abaaruhu ku dhufteen.
Bankiga Adduunka oo hakiyay gargaarka uu siin jirey dalka…
Waxaa Madaxweynahu uu ugu baaqay Dhammaan Hay’adaha gargaarka iyo cid walba oo tageero ka gaysan karta dhibaatada taagan inay tahay hada xiliga ugu haboon ee gurmad deg deg ah loo baahan yahay.
Qaar ka mid ah xoolaha nool ee uu caanka ku yahay Jubbaland ayaa la sheegayaa inay dhimanayaan kadib markii ay roobabkii deyrta ay soo daaheen isla markaana roobab wanaagsan aysan ka di’in xilligii guga ee la soo dhaafay.
Mahad 3451 posts
Madaxweyne Kenyatta oo ku gacan seyray go’aanka Maxkamadda ICJ
Pro-Iran parties denounce a ‘scam’ after the setback of the dhaweeyay elections
hanad	 Oct 28, 2021